Izindawo zokuhlala e-Moneygall - I-Airbnb
Izindawo zokuhlala e-Moneygall
County Tipperary, i-Ireland
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Feb 22.
Siyajabula ukukwamukela ukuthi uhlale efulethini lethu elikhanyayo elinethezekile lokuziphekela elitholakala kalula eMidlands. Isendaweni eyi-2 min ukusuka ku-Exit 23 usuka ku-M7 Motorway emaphethelweni edolobhana laseMoneygall lapho indawo yokucima ukoma nesitolo kungaphakathi kwebanga lokuhamba. Inikeza isisekelo esihle sokuhlola inhliziyo yezwe kuyilapho ivumela nohambo olwengeziwe oluya kwezinye iziza zezivakashi eziyisakhiwo sodumo.
Leli fulethi elizimele liseduze nekhaya lomndeni kepha linomnyango ohlukile wokungena osetshenziswa ngasese ikhishi, indawo yokuhlala / yokudlela, igumbi lokulala kanye negumbi lokugeza. Ikamelo lokulala linombhede othokomele osayizi wenkosi futhi kunombhede usofa wezivakashi ezengeziwe endaweni yokuhlala.
Kukhona umpheki kagesi, imicrowave kanye nefriji/ifriji ekhishini. Iwasha/isomisi sengeziwe muva nje ukuze sisetshenziswe izivakashi. Ilineni lombhede namathawula kunikezwa lapho ufika. I-Wifi ifakiwe. Izinto ezilandelayo zihlinzekwa ukuze kube lula kuwe.
I-Tea Coffee Milk Pepper Amafutha Okupheka Kasawoti
ubusuku obungu-7 e- County Tipperary
4.99 · 148 okushiwo abanye
IMoneygall iyidolobhana elisemaphakathi nezwe....lisemngceleni weCounties 0ffaly kanye neTipperary. Kungaba yimizuzu engama-90 ukusuka eDublin Airport.
I-Limerick City iyimizuzu engama-35.
IGalway City iyimizuzu engama-90
I-Cork City amahora angu-2.
Izinsiza zechibi ziyatholakala eLough Derg okuyimizuzu engama-20.
Yindawo ethokozisayo yokuhlala nokuyivakashela. Sinokuxhumana noMongameli waseMelika u-Barack Obama owavakashela ngo-2011. Kunesikhungo sezivakashi e-Obama Plaza esikhumbula ukuvakasha, kufanelekile ukubukeka......futhi lesi sitobhi sokuphumula sinezinhlobonhlobo zokudla okuhlanganisa i-carvery. isidlo sasemini/i-pizza/amasemishi amasaladi noma okokusonga. Jabulela ikhofi elimnandi e-Bewleys futhi uphole. Isitolo sakwaSpar naso sikule nkimbinkimbi.
Idolobhana linezindawo zepikiniki kanye nenkundla yokudlala yezingane. Izwa imicimbi yezemidlalo yasendaweni efaka imidlalo ye-gaelic nebhola lezinyawo. Ungase ube nenhlanhla yokuba neseshini yomculo ethokozisayo eshibhile yethu yasendaweni, esingathwa nyanga zonke.
Amadolobha amagugu endawo iRoscrea neNenagh angaphansi kwemizuzu engama-20 ukushayela. Idolobhana elihle laseGeorgia iBirr liyimizuzu engama-30 yokushayela lapho ungavakashela khona iBirr Castle neScience Center.
Ababungazi bakho uMary no-Eamonn bazokujabulela ukukuhlola futhi bakunikeze noma yiluphi ulwazi olwengeziwe oludingayo ngesikhathi uhlala.